IYunivesithi yaseNortheastern (cofa isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Northeastern iyunivesithi enkulu esekelwe kufuphi neBoston's Back Bay kunye naseFenway. I-Northeastern-enroll i-20,000 yabafundi ababengaphantsi kwee-graduates, kunye nabhaliso lwabafundi abangaphantsi kwe-30,000. Kwiiprogram ezingundoqo ezingama-65 ezinikezwa eNort-east, ezinye zezona ziqhankqalazo zibandakanya ishishini, uhlolo-mali, izifundo zoqhagamshelwano, ukuthengiswa, isayensi yezopolitiko kunye neengqondo.
Enye yezinto ezisemntla-mpuma ye-Northeastern iprogram yayo yoqhagamshelwano apho abafundi basebenzisa iminyaka yabo yezifundo basebenza ngokusisigxina kwiinkampani kwimiba yabo yomsebenzi. Abaninzi abasemaphandleni abaphumeleleyo kwiminyaka emi-5, bechitha iminyaka elilodwa kwinkqubo ye-co-op.
Isiko seZiko loTyelelo lwaseNortheastern
I-Northeastern Admissions Centre (nqakraza isithombe ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Northeastern Admitted Centre Centre, kwi-1st floor ye-Behrakis Health Sciences Centre, ibonisa njengeziko lokumkela kwi-campus. Uninzi lweehotele ezisekhompyutheni nezikhokelo zeqela ziqala kwiziko leZiko leMvakatyezo. Abantu abakwimanyuvesi bayamatasa-ngo-2011 bafumana izicelo ezivela kuma-43 255 abafundi. Phantse yesithathu zavunyelwa.
Ukuze ufunde kabanzi malunga nemigangatho yokumkelwa kwe-Northeastern, la manqaku angakunceda:
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph kwi-Northeastern
I-Blackman Auditorium e-Northeastern University
I-Northeastern Blackman Auditorium (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Blackman Auditorium kwi-Avenue yaseHuntington yindawo yokudlala enkulu kunye ne-orchestra kunye ne-balcony. Uhlala kuma-spectators angaphezu kwe-1 000 kunye ne-acoustics yayo yenzelwe ukuhamba nemiboniso ephakathi. I-Blackman Auditorium isetyenziselwa iklasi, iintetho, iifilimu kunye nemimculo yomculo.
UDkt. Jack Levin, intsimi ekhethekileyo yezobugebengu kunye nomlawuli-mbumbano we-Northeastern Brudnick Centre kwi-Conflict and Violence, ufundisa iklasi elithandwayo, "I-Socialistic Violence and Hate," kwi-Blackman Auditorium. Ubungakanani bendawo uhlala ngobukhulu beklasi yabafundi abangama-200.
Umzobo we-mascot yase-Northeastern, i-husky, umi ngaphandle kwe-Blackman Auditorium.
Richards Hall e-Northeastern University
Iklasi e-Richards Hall e-Northeastern (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Richards Hall ihamba ngokuthe ngqo ukusuka kwisikhululo sase-Northeastern T, kwisiHlomelo saseHuntington. Richards Hall izindlu zombini kunye neeklasi.
Eli klasi eklasini likaRichards Hall malunga nabafundi abayi-100 kwaye ixhotyiswe nge-teknoloji ye-multimedia. Ubukhulu bomgangatho weklasi e-Northeastern ngabafundi abangama-26, kunye nomfundi kwi-faculty ratio ye-14: 1.
Isiko soMfundi weCurry eNort-east
Isiko soMfundi weCursary e-Northeastern (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Curry Student Centre iphakathi kwenkampus, kwaye ngokufanelekileyo, yindawo ephakathi kweMpuma-mpuma. I-"Indoor Quad" yindawo edibeneyo yokuhlangana phakathi kwabafundi.
I-Curry Student Centre inendawo yokutya kwisitelo sokuqala, esanda kulungiswa ukubonelela izihlalo ezingaphezulu ezingama-150 kunye nabathengisi abatsha, kubandakanywa neBurger, i-Chick-Fil-A kunye ne-pizza.
I-Curry Student Centre inee-studios ezininzi kunye namagumbi okudanisa amaqela abafundi, kunye nebhokisi lebhola eliphambili lemicimbi enkulu. Kukho amaqela okudibanisa amaqela abafundi kunye namagumbi amaninzi amakhulu okufundisa. I-WRRB, kwisikhululo senomathotholo sase-Northeastern, isebenza kwiCandelo labaFundi beCurry.
Dodge Hall ne-Northeastern College of Business
Dodge Hall e-Northeastern (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Dodge Hall izindlu ze-Northeastern College of Business Administration, ezinika iiprogram kunye neeprogram. Ukugqithisa kwi-CBA kungaqhubela phambili kwi-Bachelor yeSayensi kwi-Business Administration okanye kwi-Bachelor yeSayensi kwi-Bhishini loLuntu, kwaye ukhetha uxinaniso kwiindawo ezisixhenxe zokufunda, kubandakanywa ulawulo, ulawulo, ukurhweba kunye nokuthengisa.
I-CBA ikwabonelela ngabantwana abangaphandle kwamanye amazwe kwiimarike ezikhulayo, ukurhweba kwezentlalo kunye noshishino oluzinzileyo kubo bobabini abangengomsebenzi kunye nabafundi bezoshishino.
Isizwe samazwe ngamazwe e-Northeastern University
Isizwe samazwe ngamazwe e-Northeastern (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Ummandla waseNortheastern International uyingxenye yeendawo zokuhlala eziphambili kunye neendawo zokudlela zasehholo kwiinkampu. Kwakhona enye yeendawo zokuhlala ezitsha zeyunivesiti, ngokukodwa kubafundi abasebenzisa ii-classroom okanye amalungu eNyuvesi ye-Honors Programme. Iindlu ezintathu zeendonga ezimalunga nama-1,200 abafundi.
Ukongeza kwiiborori, i-International Village ineziko lempilo, ii-lounges, izixhobo zokuhlamba iimpahla, iigalari zezobugcisa kunye ne-Internet yeKafesi.
Igumbi lokudlela elixhomekeke kwendawo yokuhlala linika ukhetho olukhethiweyo olukhulu, okubandakanya ukudibanisa, ukuthengwa kwempahla, isitishi se-burger, ukungena kwemifuno, ukutya okungahambisani ne-gluten, i-sushi, i-pizza, isobho, ibhadidi kunye nokutya kwamaNdiya.
I-Marino Recreation Center e-Northeastern
I-Marino Recreation Center e-Northeastern (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Centre yezoLonwabo eMarino yiziko lase-Northeastern ye-Fitness kunye nezolonwabo. Ukongeza kwimakethe yokutya kunye neefesi kwisitelo sokuqala, iMarino ibuyele izindlu zebhoksi yebholabhu kunye neenqwelo zebhola ye-volleyball, umzila wokuhamba, inqanaba lokuqeqesha, i-cardio izixhobo kunye namagumbi amaninzi kwiiklasi zengqondo.
Izixhobo ezingaphezulu kwezemidlalo zisetratweni, kubandakanywa neCacot Centre kunye nomzila wangaphakathi, intsimi yebhola yasekhaya kunye neenkundla ze-racquetball. I-Northeastern ibuye ine-pool yangama-25 yangaphakathi yokubhukuda ngaphakathi kwi-Barletta Natatorium.
UMasipala wase-Arena e-Northeastern
UMontws Arena e-Northeastern (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
U-Matthews Arena yiyona ndlela yokudala iinjongo zemidlalo ezininzi esasetyenziswayo kwihlabathi kwaye inembali ebutyebi eye yabamba abaongameli base-US, imikhosi enkulu yebhokisi kunye namakhonsathi.
I-arna yalungiswa ngokubanzi ngo-2009, kwaye ngoku iyakumakhaya kwi-hockey yamadoda ase-Northeastern ice kunye namaqela e-basketball, kunye neqela labafazi be-hockey yabesifazane.
Ukongeza kwimicimbi yezemidlalo, i-Matthews Arena ibamba iindwendwe kwiikhosi ze-campus kuquka umcimbi wekonsathi wonyaka we-Springfest kunye nemikhosi yokugqiba.
Iimayunivesithi iinkalo ezisixhenxe zezemidlalo kunye nabesithoba abesetyhini abahlukeneyo. I-Northeastern Huskies inomncintiswano kwi- Colonial Athletic Association kwimidlalo emininzi.
Isakhiwo seSayensi seMpilo ye-Mugar e-Northeastern
Ukwakhiwa kweZakhono zoBomi be-Mugar e-Northeastern (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Isakhiwo seSayensi seMpilo ye-Mugar sikhaya kwiSebe lezeNgqondo, kwiSebe leBilo, kwiSebe lezoBunjineli leKhemikhali kunye neKholeji ye-Pharmacy. Isakhiwo sinezindlu ezininzi zeelabhu neeklasi. Yanikelwa eNortheastern ngo-1963 nguStephen D. Mugar, ongububele owanikele inxaxheba kwiiyunivesithi ezininzi kwindawo yaseBoston.
IThala leNyoka kwiNyuvesi yaseNortheastern
I-Library yeStell e-Northeastern (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
IThala leNcwadi yeNyoka iLebrari yezona ndawo eziphambili. Ukongeza kwimiqulu yezigidi eziyi-1.3 iqulethe, ilayibrari nayo ihlala kwi-Digital Media Design Studio kunye nezixhobo ezinkulu zokusebenzela ezixhotywe kwi-software ye-Adobe CS5, izixhobo zokurekhoda kwezobugcisa kunye nezixhobo ze-videography. Kukho ezintathu ezongezelelweyo iilebhu zekhompyutha ezifumanekayo zokusetyenziswa kwabafundi. Ilayibrari ivulekile iiyure ezingama-24, ukulungiselela iimfuno zezifundo zabafundi ngaliphi na ixesha lemihla okanye ubusuku.
Stetson East e-Northeastern
Stetson East e-Northeastern (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Stetson East iholide kunye neendawo zokutya. I-Stetson East iyinyaka yokuqala, idibeneyo idityaniswe nezindlu ezine eziphantsi kwezindlu eziphantse malunga nabafundi abayi-300. Kukho amashishini angatshatanga, aphindwe kabini, anamathathu atholakalayo.
I-Marketplace Marketplace, ihholo lokudlela eStetson East, unikeza iintlobo zokutya ezintsha, kuquka i-pizza, i-burgers, i-macaroni kunye noshizi kunye ne-pasta, kunye nesigaba se-vegan. Abafundi banandipha ukutya kwasekuseni iStetson East, ngakumbi i-omelettes. Igumbi lokudlela elingumakhelwane, iStetson West, alisebenzisi ukutya kwasekuseni.
Stetson West e-Northeastern University
Stetson West e-Northeastern (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Stetson West nenye i-freshmen dor kunye nabafundi abayi-500. Ngenye yezona zikhulu "ezinkulu zezindlu" zokuhlala kwiiklasi, abafundi bezindlu zobunjineli, inzululwazi yesayensi kunye neenkqubo zezesayensi zempilo.
I-stetson West idlo yokutya ngaphakathi kweso sakhiwo kufaka i-grill grill, i-bar cheese, isitishi se-sandwich, ivenkile yezitena kunye nezikhululo zokutya ezishushu. Izakhono ze-Stetson West ziquka isikhululo sefry and piouras pizzas. Ayinakusiza ukutya kwasekuseni.
I-Northeastern's West Village
I-West Village e-Northeastern (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-West Village yindawo ehlala kuyo enkulu, enezakhiwo ezininzi eziqhelekileyo phakathi kwabafundi be-foster. Eyaziwayo ngezobugcisa balo bobugcisa kunye nezibonelelo zokuhlala zanamhlanje, iiyunithi zendawo yokuhlala zikwabelana ngezindlu zokulala kunye neendawo zokulala ezimbini. Iindawo zokuhlala zinekitshini kunye nabalahla bokuhlambalahla kunye nokulahlwa kwemfucuza, kwaye ubunzima buye bawubamba ivoti yomfundi ithuba lokuvota "kwiZindlu eziLungileyo zokuHlala." I-West Village iphinda iyanconywa ngokusondela kwayo kwiMyuziyam yezobuGcisa, kunye nemibono ekhangayo yeBoston skyline ekhoyo kwamanye amagumbi.
Funda kabanzi malunga ne-Northeastern and what takes to get accepted: Iprovensi yaseYurophu yaseMpuma .
Iingoma ezi-10 ezivela kwi-Detlow's Punk Scene
Uphawu lweSandi lwesiNgesi (Inkcazo kunye nemizekelo)
Imifanekiso yeVenn yokuCwangcisa imiSebenzi kunye nokunye